नेपाली यौन कथा-रुपा काकीसँगको त्यो यात्रा | Kamsastra
नेपाली यौन कथा-रुपा काकीसँगको त्यो यात्रा
Sex, आन्टीसँग, नेपाली यौन कथा, नेपाली यौन कथा-रुपा काकीसँगको त्यो यात्रा,
२ जनाको नानीको आमा भए पनि उनको रुपरंग र जवानीले नलोभ्याउने पुरुषहरु कमै हुन्थे । सबैले भन्ने गर्थे कि ''सिरान घरे मान्छे भने लाटा लाटा र रुप पनि परेको हैन तर श्रीमती भने बडो सुन्दर भेट्यायो। ,, सायद तिनीहरुलाई पनि सिरान घरे काकीको रुप रंगमाथि लोभ लागेर नै यस्तो भनेको हुनुपर्छ । त्यही सिरानघरे काकीसँग एकपटक सदरमुकाम बजार देखी फर्केर आउँदा साह्रै रमाइलो गरियो। साईनोले काकी परे पनि हामीबीच नजिकको साईनो भने थिएन। काम चलाऊदा फरक पर्दैनथ्यो। पढ्नुहोस् यही रुपा
काकीसँगको एकरात तपाईहरुको लागि त्यो क्षण बाँड्न गईरहेछु।
एक दिन म रुपा काकीसँग बजार गएको थियौ ।हाम्रो गाउँदेखी सदरमुकाम बजार आउन /६ घण्टा पैदल हिंड्नु पर्ने भएकोले प्राय : फर्कदा रात नै पर्थ्यो।हामी बजारदेखी फर्कदै थियौ ।टाढाको बाटो हिंड्नु पर्ने भएकोले हामी केही खाजा खानै पर्ने थियो । त्यसैले गाउँघरमा चल्ने लोकप्रिय खाजा थुप्पा र जाँड खाने निधो गर्यौ हामीले ।खाजा खाइसकेर बाटो लाग्दा मैले बाटामा खाजा भन्दै २ वटा आधा लिटरको रोयल स्ट्याग पनि किनेर झोलामा हाले । हामी जति सक्दो हतार हतार गर्दै बाटो नाप्न थाल्यौ। घर आउन अझै निकै हिंड्नु पर्थ्यो । भारी पनि अली धेरै नै भएकोले भने जस्तो छिटो पनि हिंड्न सकेको थिएनौ। चौतारै पिच्छे बिसाउदै हामी रोयल स्ट्याग पिउदै हिंड्न थाल्यौ। अली नशा नपिए हिंड्नै गाह्रो थियो । बाटोमा पिएको जाँड र यो रक्सी मिसिदा कोक्तेल भएछ क्यार अलि अलि नशा पनि दिदै थियो। फेरी यो नशा भन्ने चीज जति खायो उति खान लाग्ने नभन्दै बाटो बाटो हामी २ जनाले नै त्यो १ लिटर रक्सी त खत्तम पारीएछ। अब हाम्रो खुट्टाहरुले बाटो बिराउन थालीसकेका थिए। तर पनि लठ्ठीको साहारामा हिड्दै थियौ । झन झन आँध्यारोले संसार कब्जा गरीसकेको थियो । हामी टर्चलाईट बाल्दै अगाडि बढ्दै थियौ। रातको समय त्यही माथि रक्सीको नशा र ओरालो चिप्लो बाटो ....हाम्रा खुट्टाहरु ठेगानामा बसीरहेका थिएनन । तर पनि लड्न लागे एकले अर्काको हात समात्दै हामी ओरालो झर्दै थियौ । कहिलेकाही चिप्लिने क्रममा जिउ थाम्न नसकेर कुनै बेला म उनीसँग र कुनै बेला उनी म सँग ठोक्किन आईपुग्थ्यौ। यसरी ठोक्किदा माफी मगामाग गरे पनि मलाई परस्त्रीको स्पर्षले मनमा तरंग ल्याइदिन्थ्यो। सायद उनलाई पनि यस्तै हुन्थ्यो होला हुत्तिएर आउने बाहनामा मेरो ढाडमा उनको वक्षस्थल अड्याउथिन । त्यस बेला मलाई खपीनसक्नु हुन्थ्यो । यत्तिकैमा उनी हुरिएर म माथि आईपुगिन म पनि चिप्लिएर खौलामा परे । हाम्रो भारीहरु सबै पोखियो । म उतानो परेको थिए र उनी घोप्टो परेर ठीक म माथि थिईन । मैले नशाको उत्तेजनामा उनलाई कम्मरमा च्याप्प समातेर तानी पो रहेको रहेछु। मेरो लाडो पनि ठन्नक भएको रहेछ जसको आभास उनले पनि प्रतक्ष गरेकी थिईन । छ्या के गरेको ? अहिले मान्छे आयो भने । भन्दा पो म झसँग भए हामी दुई जना सम्हालिदै सबै भारीहरु उठाएर मिलायौ । अलि तल चौतारीमा आएर बिसायौ । त्यसबेला सम्म हामी दुई जना चुपचाप थियौ ।
मलाई भने उनको त्यो स्पर्शले उत्तेजना ल्याइदिएको थियो। चौतारीको शितल हावा खाँदै हामी सँगै बसेका थियौ । मलाई भने उनको त्यो चरम स्पर्शले अलि मन उथलबुथल भएसकेको थियो। यत्तिकैमा मैले आँट गरेर '' काकी भाका बसौंन भने।,, डरले मेरो स्वार थर्थराईरहेको थियो। तर संयोग नै भन्नु पर्ला उनलाई पनि यस्तै मन भएको थिएछ क्यार यो बीच बाटोमा हुँदैन पछि गोठालोमा बसाम्ला भन्नु भयो । अब मैले भन्न खोजेको कुराको आसय बुझिहाले । छेउमा गएर पछाडि कुम मुनीदेखी हात छिराएर उनको दुधका पोकाहरुलाई मसार्दै भने यो त झन एकान्त छ गोठालोमा त सबैले देख्छन । हे अर्काको मान्छेलाई छुने हैन है कानुन लाग्छ भन्दै त्यहाँबाट उठेर अलि पर सरिन । म पनि उनीसँगै सर्दै सजय भोग्नु परे पनि भोगुम्ला नि गल्ती गरे पछि त कायमी नै हुनु पर्‍यो नि हैन भन्दै फेरी उनको पोका पक्रिए ।२ जनाको नानीको आमा भए पनि उनको दुधको पोका गोलो र टम्म नै थियो जस्तो नै थियो जस्तो बिहे नगरेका केटीहरुको हुन्छ । मैले भन्देको छु है नआउनु है मेरो छेउमा फेरी पनि भाग्ने मुडमा नै थिईन । मैले यसपाली भने पक्रेर भित्तामा चेप्दै उनको चाक मसार्न थाले साह्रै गर्न मन लाग्यो र पो र काकी के त छाप लाग्ने हैन दाग लाग्ने हैन । जिन्दगी बाँचुञ्जेलको रमाइलो त हो नि मरी लानु के छ र भन्दै उनको चाक ढाड काँध गाला मसार्दै किस गर्न थाले ।नशाको बेला यौन उन्मातभित्र पग्ली सकेकी उनले पनि हैन कत्रो छ हौ चेपेर नै थाला पारी दिन्छु र पो भन्दै मेरो लाडोलाई पेन्टबाहिर देखि खेलाउन थालिन् । मैले पनि सजिलोको लागि मेरो फास्नर खोलिदिए । मैले उनलाई च्याप्प समातेर जुरुक्क उठाएर फलैचामा ल्याए । बिस्तारै उनलाई सुताएर उनीमाथि चढी पुती माथि बस्दै २ हातले उनको स्तन गोबर सोहरेसरी सोहर्दै माड्न थाले । उनले पनि मेरो लाडोलाई मज्जा मानेर खेलाउदै लाडो त गतिलो रहेछ यसलाई चेप्न त हैन मेरो ढ्वाङ नै पो च्याती देला जस्तो लाग्यो भनिन । किन काकी काकाको सानो छ हो ? मैले उनका दुधका मुन्टा खेलाउदै सोधे । सानो छ बुढी औंला जत्रो मात्र हालेको र निकालेको नै थाह हुँदैन उनले खुलेर भनिन। यस्तो हो भने पहिला नै मलाई भन्नु पर्थ्यो नि त म हाजिर हुने थिए तपाईंको सेवामा । हो हो एलिना पूजा मालबाँसे माइली वसन्त राम्री तिर धाउदै ठीक्क हुन्छ हेर्छ चै हामी जस्तो नानीको आमालाई।।।? हा हा हा हा हा हा म हाँसे । चित्त बुझ्यो ? फेरी प्रश्न गरिन । हो नि त मैले पनि साकारत्मक जवाफ दिए ए साँच्ची ब्लु फिल्म हेरेका छौ ? छु किन यस्तै गर्ने हो ?हो भने लौन त चुसिदिनुस् भन्दै मैले मेरो लाडो उनको मुखमा लागेर राखी दिए । अन्त के त भन्दै उनले त मेरो लाडोलाई चुस्ना पो थालिन् ओहो फिल्ममा हेरेको बाहेक मैले कसै केटीहरुलाई यसरी मुखमा मैथुन गर्न दिएको थिईन बरु छिटो छिटो चिक्दा चिप्लिएर कन्ढोमा भने गाको थियो यसरी चिप्लिदा २/३ जना रोएका पनि थिए।मलाई त उनले मुखमा राखेर चुस्दै भित्र बाहिर निकाल्दा त चिकेको भन्दा पनि तातो पो लाग्यो । कुत्कुती लागेर उखरमाउलो भए । फुत्त बाहिर निकाले मेरो लाडो झन चम्केर सनक्क भएर ठन्केको थियो । खै म पनि चाटी दिन्छु मलाई पनि आज नौलो अभ्यास गर्न मन लाग्यो किन भने जति पहिला गरेको चिकामारीमा न मैले चुसाएको थिए न चाटेको नै । अहँ हुँदैन उनले भनिन् मेरो फोहोर छ । केही हुँदैन मेरो पनि त फोहोर नै त थियो नि त । लु त्यसो हो भने यो फलैचामा टाटानको मजेत्रो ओछ्याउँ भन्दै मजेत्रो ओछ्याईन अब म पनि उनको बिपरीत फर्केर सुत्दै टाङ फार्न लगाउदै उनको पुतीमा हात पुर्याए । ए काकीले त भर्नु हो भने त ३०० मिली लिटर र पानी नै झारी सकेकी थिएछिन नि प्यान्टी त धुनलाई भिजाको जस्तै लपक्क भै सकेको थियो । हत्त न पत्त पेन्टी फुकाली दिएर जिब्रोलाई उनको पुतीको टुप्पामा लगेर जोडे आहा खै के खै के र्याल नै र्याल भएको उनको पानी झरेको पुतीको स्वाद चिप्लो र कस्तो कस्तो लाग्यो तर नौलो तरिका भएर मैले खुब रुचीको साथ नै चाट्न थाले । म जति उनको पुतीमा जिब्रो छिराउथे उति उनी पनि मेरो लाडोलाई मुख भित्र घुसार्थिन । यो क्रम हामी बीच झन्डै ४५ मिनेट भयो मलाई अब अती भईसकेको थियो। मैले मुखमा नै झार्दिम…? भन्दै सोधे उनले त हुन्छ भन्दै झन जोडले पो भित्र बाहिर गरिदिन थालिन्। बढी नै मजा आएर भित्रै सम्म ठेलिदिएको त घोक्रो सम्मै पुगेछ क्यार लाडो निकालेर खोक्न थालिन् । के सारो ठेलेको हाम्रो चाही शारीर हैन कि क्या हो ? भन्दै फेरी बिस्तारै चुस्ने काम सुरु गरिन । यो क्रम जारी रह्यो ख्वात ख्वात ख्वात ख्वात ।मेरो लाडो बाट फुसी झर्यो उनले यसलाई पनि निली दिईन ।
हामी त्यही अवस्थामा बसिरह्यौ मैले उनको पुतीमा जिब्रो निकाल्दै बसी रहे उनै पनि मेरो लुलो बनेको लाडोलाई मसार्दै चुस्दै रहिन । ४/५ मिनेट पछाडि फेरी मेरो लाडोले प्रतिकृया दिन थाल्यो। मैले पुती चटाईलाई झन छिटो र भित्र सम्म जिब्रोले ठेल्ने थाले उनले पनि पुन: चुस्न थालिन । त्यस बेला सम्म मेरो लाडो ठन्केर फेरी काठ भईसकेको थियो। म उठेर फर्किदै उनको कुर्ता फुकाली दिए । उनले पनि मेरो टि-सर्ट खोली दिईन । अब मलाई धेरै पर्खनु थिएन ।उनको र मेरो तातो सासहरु क्रमश: क्रमश: छोटो हुँदै थियो। म बिस्तारै उनी माथि चढे खुट्टा फट्याउन लगाएर उनको त्यो सुरुङमा मेरो लौकालाई बिस्तारै हुले । २/३ धक्कामा मेरो लाडो भित्र सम्म नै पुग्यो। अब मैले भित्र बाहिर गर्दै चिकाइको गति बढाउन थाले । उनी पनि चुप लाग्दै सास छोटो छोटो पार्दै मलाई मन परेको बच्चालाई जस्तो जता पायो उतै किस गर्दै चाट्न थालिन् । मैले दनादन दिन थाले । आम्म्म्म्म्म्म्मा । हैन लामो लामो लाग्छ त भन्दै मुख फोडिन लामो हैन काकी जम्मा ८ ईन्चको मात्र हो ।अनी ठुलो नि कस्तो लाग्यो च्यापेर काम पुर्याइदिने भनेको हैन मैले सोधे। ठिकैको रहेछ ठीक्क हुने धन्न बसेको रहेछु बिरालो लाँडेसँग यस्तो मजा भए पो जिन्दगीको स्वाद पनि मिल्थ्यो के गर्नु पहिलाको जमाना लप पर्न जानिएन नत्र चाख्दै छान्दै बिहे गरिन्थ्यो होला उनले जिन्दगीको नमजा भनिन । मैले झन उनलाई उनको दुई काँधमा हात पुर्याएर आफु तिर खिच्दै उनको गालामा टोकी दिए । उनलाई पनि फुर्क्याउदै भने काकीको पुती पनि साह्रै मीठो रहेछ तातो तातो मोटो मोटो आहा गाउँका तरुनीहरु भन्दा मलाई त तपाईंको पो मज्जा लाग्यो । हो र मेरो राजा तिमीले पनि त मलाई आज बडो यौन सन्तुष्टी दिलायौ म झन भित्रै देखि खुशी छु भन्दै मेरो कम्मर झन कसिलो पारीन । मैले पनि झन सारो चिक्न थाले उनी पनि थ्याङ यु भन्दै मलाई खुट्टा फट्ट्याइदिदै मलाई सजिलो बनाइ दिदै गईन। खै के हो के हो यो संसारको नियम पनि पुती देख्दा लाडो ठन्किने लाडो देख्दा पुती चम्किने।
हामी २ जनाको घम्साघम्सी चिकाइसँगै हाम्रा सासहरु उत्तेजनाले छोटो छोटो भाईरहेका थिए । मैले उनको पुती भित्र गाई वस्तु बान्ने किला गाडे झै मेरो लाडोलाई गाड्दै थिए। उनले पनि मेरो राजा मैले आज बल्ल जिन्दगी पहिलो यौन सन्तुष्टी पाए भन्दै चिप्लो पानी झार्दै मलाई कम्मरमा कस्दै मसार्दै साथ दिदै थिईन । यत्तिकैमा मैले पुती देखी लाडो निकालेर चाकमा हुल्न थाले । आम्मै के गरेको? लगाउने ठाउमा चाही नलगाएर एया दुख्यो भन्दै अगाडि सरिन। टाउको पसीसकेको मेरो लाडो फुत्त बाहिर निस्कियो। मैले प्यारले उनको दुध माडी दिदै एक पटक दिनुस न त्यहाँ त झन टाईट हुने रहेछ त भन्दै फकाए। नाइँ हुँदैन हुँदैन भन्दै कोल्टे पेरिन please छिराई त हेराम कस्तो हुनेरहेछ भन्दै फेरी पछाडिदेखि पुतिमा लाडो छिराउदै अनुरोध गरे । उनी चुप बसिन । मैले फेरी पुतीको पानीमा लत्पतिएको लाडोलाई उनको चाकमा तेर्स्याए । यसपटक आधा पसेको हुँदो हो फेरी दुख्यो भन्न थालिन। मैले लाडोलाई तुरुन्त बाहिर निकालेर उनको पुतीमा चोबाले । यसरी घरी पुतीमा घरी चाकमा चिक्दा चिक्दै पुरै लाडो गूदद्वारमा पस्ने भयो। मैले अब निर्वाध चाकमा चिक्ने थाले । आहा कति टाईट बाँझो फोरे झै लाग्ने । मैले उनको गालामा चाट्दै चाकमा चिक्दा उनी पनी अकिलती फर्किदिदै उनको गाल थापीदिन्थिन। हामी यसरी मच्चिएको पनि १५/२० मिनेट भाईसकेको थियो। मैले उनको पुतीमा लगेर फेरी लास्ट स्पीड बढाए। मेरो लाडो अब फुर्फुराउन लागेको थियो। झर्न आँट्यो झार्दिम भनेर सोधे उनले पनि हुन्छ भनिन। चाकमा झार्नु होला है पुतीमा झार्दा नानी बस्न सक्छ भनेर मलाई सजग गराईन । मैले पनि चाकमा घुसार्दै ल्वात ल्वात ल्वात ल्वात गुलाको फेद सम्मै भासिने गरी हालिदिए भित्र फुसी झार्न थाल्यो । मैले उनलाई क्र्याक कुर्युक पार्दै मेरो काकी मेरो काकी भन्दै मेरो जिउको भार पुरै उनिमाथी छाडिदिए । उनले पनि हजुर हजुर भन्दै मेरी शरीर मसारिरहिन सायद मेरो फुसी उनको दिसासँगै मिल्न पुग्यो होला । मेरो फुसी झरी सके पछी म धेरै बेर सम्म उनको जिब्रो चुस्दै बसिरहे उनले पनि मलाई प्यारले अंगालो मारिरहिन । मैले बिस्तारै मेरो फुसी झरेको लाडो निकाले उनले निकाल्न नदिई कम्मरमा कसिरहिन । मैले अब त झरिसक्यो भने फेरी एक पटक भन्दै मेरो गला हल्का टोकी दिईन मैले एक छिनमा भन्दै उनको दुधको पोका मसारिदिए । हामी चिकामारी सकेर चौताराको चिसो हावा खाँदै बस्यौ । बाँकी रहेको चाउचाउ र अन्य खाजा खाँदै हामी घरको बाटो नाप्न थाल्यौ ।
मैले उनलाई बाटो भरीमा ३ पटक चिके । घर आउनु भन्दा १० मिनेटको दुरी थियो होला फेरी उनले अब अन्तिम पटक गरौ यस्तो गज्जबको चिकाइ मेरो यो ३२ बर्षको अबधिमा कहिले पनि भको थिएन भन्दै मेरो हातमा तानिन । मैले पनि हुन्छ भन्दै उनको यौन भोक मेटाइदिए तर अन्तिम पटक भने झर्न लाई सारो पर्‍यो उनी र म पसिना पसिना भएका थियौ तर पनि सन्तुष्टी भने साह्रै मिल्यो। आधा वैशे हरु सँग केटीहरु सँग एक छिन चोबालेर गाको जस्तो भने हुँदैन रहेछ।हामी घर पुग्दा रातको साढे १२ भाईसकेको थियो। काकाले बस काकिले मासु ल्याएको छ भुटेर खाएर जा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले भो काका आज साह्रै थाकेको छु बरु भोली आउँला भन्दै आफ्नो घर तिर हिंडे।
Labels: Sex, आन्टीसँग, नेपाली यौन कथा, नेपाली यौन कथा-रुपा काकीसँगको त्यो यात्रा